Linux Foundation Inozivisa OpenJS, Mubatanidzwa weNode.js uye JS | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Linux Foundation yakaunza huwandu hwakakosha hwekudyidzana kusimbisa kuvandudzwa kweakawanda akavhurwa sosi mapurojekiti ayo anodyisa yakawanda yeWebhu.
1 Nezve iyo OpenJS Foundation
1.1 Kuenderera Mberi Dhirivhari
Nezve iyo OpenJS Foundation
Kutsvaga kwemusha usina kwawakarerekera ndeimwe yemakore ehondo inotyisa yehurumende mukati memunharaunda yeNode.js.
Muna Nyamavhuvhu 2017, chetatu chenhengo dzekomisheni inodzora inotungamira manejimendi ezuva nezuva ezve chirongwa cheNode.js ingadai yakasiya.
Mukuburitswa kwepepanhau, Iyo Linux Foundation yakazivisa kuti OpenJS Foundation ichabvisa mashandiro ekushanda pakati pemasangano maviri uye kugadzirisa chiitiko yemakambani anopa rubatsiro rwemari.
Mushure memwedzi mitanhatu yekufungisisa uye huwandu hwakawanda hwemhinduro dzemunharaunda nekubatana, iyo Node.js Foundation uye JS Foundation vanobatana kuti vagadzire iyo OpenJS Foundation.
Nguva Chinangwa ndechekutendera mapurojekiti kujoina zviri nyore OpenJS Foundation uye kutora mukana wehunyanzvi mamodheru anopiwa kubva munharaunda.
Kuenderera Mberi Dhirivhari
Pamusoro pekubatanidzwa kwambotaurwa, Iyo Linux Foundation yakazivisawo kugadzirwa kweChipiri Chinoburitsa Foundation (CDF).
CDF inoitirwa kushanda senzvimbo yevanopa, vanogadzira nevashandisi kutora chikamu nekugovana ruzivo uye maitiro akanakisa kazhinji kukurudzira kuvandudzwa kwemapurojekiti akavhurika.
Sezvinoreva zita iri, Inoenderera Dhirivhari Nheyo inovaka pane isina musono kuendesa uye yekubatanidza modhi iyo inogonesa vese vanobatika kutora mhinduro, kuita shanduko, uye kuendesa ivo nekukurumidza zvakanyanya.
CDF inotanga nenhengo gumi nenomwe, kusanganisira makuru mabhurani senge Google, Netflix, Red Hat, Alibaba, Autodesk, SAP, Huawei, uye GitLab.
Iyo yakavhurwa sosi sisitimu Jenkins, Jenkins X, Spinnaker (yakagadzirwa neNetflix uye pamwe inotungamirirwa neNetflix neGoogle), uye Tekton mamwe emapurojekiti ekutanga akachengetwa neCDF, akadaro Linux Foundation.
Sangano revabereki rakati rinotarisira kuti mamwe mapurojekiti awedzerwe kuCDF kana yaumba komiti yekuongorora, CDF ichachengetedza mhando yakavhurika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Foundation inozivisa OpenJS, mubatanidzwa weNode.js uye JS